45s Sajid Javid: &#39;Izay minisitra manaja tena&#39; dia handà ny fitakian&#39;ny PM images and subtitles
Voninahitra lehibe ny manompo amin'ny maha-mpiadidy ny exchequer ary, faly aho fa ny praiminisitra te hanendry ahy indray, tsy afaka nanaiky ireo fepetra aho fa izy namikitra. Nahatsapa aho fa tsy tavela afa-tsy ny nametra-pialana fotsiny. Ankehitriny, ny mpandimby ahy dia manana ny fanohanako feno ary hitohy ny praiminisitra mankafy ny fanohanako feno, toy ny ataon'ny governemanta. Ireo fepetra napetaka dia fepetra takiako ireo mpanolotsaina ara-politika rehetra. Fantatrao, ireo dia olona niasa mafy tokoa ho an 'ny governemanta, tsy ny governemanta ihany, fa ny firenena manontolo, nahavita asa nahafinaritra. Tsy vitako ny nanaiky ireo fepetra ireo. Tsy mino aho fa misy minisitra manaja tena hanaiky ireo fepetra ireo ary noho izany, nahatsapa aho fa ny tsara indrindra dia ny mandeha.
Sajid Javid: &#39;Izay minisitra manaja tena&#39; dia handà ny fitakian&#39;ny PM
< start="0.48" dur="3.26"> Voninahitra lehibe ny manompo amin'ny maha-mpiadidy ny exchequer >
< start="3.74" dur="2.28"> ary, faly aho fa ny praiminisitra >
< start="6.039" dur="3.621"> te hanendry ahy indray, tsy afaka nanaiky ireo fepetra aho >
< start="9.66" dur="1.28"> fa izy namikitra. >
< start="10.94" dur="3.159"> Nahatsapa aho fa tsy tavela afa-tsy ny nametra-pialana fotsiny. >
< start="14.46" dur="4.02"> Ankehitriny, ny mpandimby ahy dia manana ny fanohanako feno ary hitohy ny praiminisitra >
< start="18.48" dur="2.1"> mankafy ny fanohanako feno, toy ny ataon'ny governemanta. >
< start="21.44" dur="3.9"> Ireo fepetra napetaka dia fepetra takiako >
< start="25.349" dur="1.43"> ireo mpanolotsaina ara-politika rehetra. >
< start="26.779" dur="3.051"> Fantatrao, ireo dia olona niasa mafy tokoa >
< start="29.83" dur="2.08"> ho an 'ny governemanta, tsy ny governemanta ihany, fa ny firenena manontolo, >
< start="31.91" dur="1.03"> nahavita asa nahafinaritra. >
< start="33.38" dur="2.24"> Tsy vitako ny nanaiky ireo fepetra ireo. >
< start="35.87" dur="3.53"> Tsy mino aho fa misy minisitra manaja tena hanaiky ireo fepetra ireo >
< start="39.41" dur="3.25"> ary noho izany, nahatsapa aho fa ny tsara indrindra dia ny mandeha. >